ဈေးကှကျထိုးဖောကျနညျးလမျးကောငျးတဈခု | မာသငျ
၃မိနဈအတှငျး လုပျငနျးအိုငျဒီယာ တဈခု ရစမေညျ။
“သငျ့လုပျငနျးအတှကျအကြိုးရှိမယျ့ အိုငျဒီယာ တဈခု ရလိမျ့မယျလို့အာမခံပါတယျ။
အခြိနျ ၃ မိနဈပေးပွီး ဒီစာကို ဖတျကွညျ့ပါ။”
စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုငျး အာမခံခကျြ တဈခုကို ထဲ့သှငျးရောငျးခကြွရတယျ။
ဝနျဆောငျမှု တဈခုကို ပေးတာပဲဖွဈဖွဈ၊
သုံးစှဲလိုကျရငျ ၊ သုံးစှဲသူကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲ ဘယျလိုအဆငျပွသှေားမယျ .. ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြတဈခု။
ဘယျရသေောကျသောကျ ရငေတျပွတေယျဆိုပမေယျ့ ..
ရသေနျ့ဗူးကို ဝယျသောကျတယျဆိုတာ သနျ့ရှငျးရမယျ ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြ ကို ကွိုကျလို့ပဲ။
ဘယျတက်ကစီကို စီးစီး ဒီခရီးရောကျတယျဆိုပမေယျ့ …
Grab ကိုစီးတယျဆိုတာ အန်တာရယျကငျးတယျ၊ ဈေးနုနျးတငျမထားဘူး ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြကို ယုံကွညျလို့ ပဲ။
ကားဂိတျ နဲ့ပစ်စညျးပို့တာ ပစ်စညျးပြောကျနိုငျတယျဆိုတာသိပမေယျ…
နခေ့ငျြး မွနျမွနျရောကျနိုငျတယျဆိုတဲ့ အာမခံခကျြကို ပိုသဘောကလြို့ပဲ။
လုပျငနျးတျောတျောမြားမြားက သူတို့ကုနျပစ်စညျးကို ၁နှဈအာမခံသညျလို့ပွောနခြေိနျမှာ ကိုယျက ကိုယျ့ကုနျပစ်စညျးကို ၂ နှဈအာမခံသညျ လို့သာသညျဆိုယုံ ပွောတာနဲ့ ဈေးကှကျထိုးဖောကျနညျးဗြူဟာမဖွဈဘူး။.
တဈသကျတာ အာမခံသညျ လို့ဆိုမှ ဈေးကှကျရနိုငျတဲ့အခကျြဖွဈမယျ။
မွို့တဈမွို့ကနေ အခွားမွို့တဈမွို့ကို ပါဆယျထုပျပို့ဖို့အတှကျ ရကျသတ်တပတျကွာခြိနျမှာ Fedex လုပျငနျးက “overnight Delivery” ဒီနပေို့မနကျဖွနျရောကျ ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြနဲ့ဈေးကှကျ ထိုးဖောကျခဲ့တယျ။
( ၆ ရကျအတှငျးရောကျ.. မဟုတျဘူး။)
ပီဇာရောငျးတဲ့ ဆိုငျတှေ မှိုလိုပေါကျနခြေိနျမှာ Domino ပီဇာလုပျငနျးက “30 min or free” ဖုနျးဆကျမှာရငျ မိနဈ၃၀ အတှငျးအရောကျပို့တယျ၊ မရောကျရငျ ပိုကျဆံမမေးပဲ အလကားစား ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြ နဲ့ဈေးကှကျထိုးဖောကျခဲ့တယျ။
ဆရာဝနျကို ၁၅ မိနဈထကျပို စောငျ့စရာမလို ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြနဲ့ဆေးခနျး အခြို့က ဈေးကှကျထိုးဖောကျခဲ့တယျ။
ဘဏျမှာငှသှေငျးငှထေုတျလုပျဖို့၅ မိနဈထကျပို စောငျ့စရာမလို၊ ၅ မိနဈကြျောသှားရငျ အကောငျ့ထဲကို ၅ ဒျေါလာထညျ့ပေးမယျလို့ အာမခံခကျြပေးမယျ လို့ပွညျပဘဏျကွီးတဈခုက ကွငွောပွီးဈေးကှကျထိုးဖောကျခဲ့တယျ။
နာမညျကွီးရှနေ့တေဈယောကျမဟုတျပမေယျ့ .. အမှုမနိုငျရငျ အခကွေးငှပေေးရနျမလို ဆိုတဲ့ အာမခံခကျြနဲ့ရှနေ့တေဈယောကျ ရှတေ့နျးရောကျပွီး ဈေးကှကျပေါကျခဲ့တယျ။
အာမခံခကျြဆိုတာ ..အစှနျးရောကျမယျ၊ စားသုံးသူစိုးရိမျရဆုံးအခကျြတဈခကျြကိုပဲ ကောငျးကောငျးအာမခံနိုငျမယျဆိုရငျ …..
လုပျငနျးတှအေတှကျ တျောတျောစှမျးတဲ့ ဈေးကှကျထိုးဖောကျနညျးဗြူဟာတဈခု ဖွဈမယျဆိုတာပါပဲ။
ဆငျတုတျကှေးပြောကျကာစ လကျနာနာနှငျ့ ရေးသညျ။
၃မိနစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအိုင်ဒီယာ တစ်ခု ရစေမည်။
“သင့်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးရှိမယ့် အိုင်ဒီယာ တစ်ခု ရလိမ့်မယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
အချိန် ၃ မိနစ်ပေးပြီး ဒီစာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။”
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း အာမခံချက် တစ်ခုကို ထဲ့သွင်းရောင်းချကြရတယ်။
၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊
သုံးစွဲလိုက်ရင် ၊ သုံးစွဲသူကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အခက်အခဲ ဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားမယ် .. ဆိုတဲ့ အာမခံချက်တစ်ခု။
ဘယ်ရေသောက်သောက် ရေငတ်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့် ..
ရေသန့်ဗူးကို ၀ယ်သောက်တယ်ဆိုတာ သန့်ရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့ အာမခံချက် ကို ကြိုက်လို့ပဲ။
ဘယ်တက္ကစီကို စီးစီး ဒီခရီးရောက်တယ်ဆိုပေမယ့် …
Grab ကိုစီးတယ်ဆိုတာ အန္တာရယ်ကင်းတယ်၊ ဈေးနုန်းတင်မထားဘူး ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကို ယုံကြည်လို့ ပဲ။
ကားဂိတ် နဲ့ ပစ္စည်းပို့ တာ ပစ္စည်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပေမယ်…
နေ့ချင်း မြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကို ပိုသဘောကျလို့ ပဲ။
ကိုယ်အာမခံချက်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကို ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ပဲလိုတယ်။
လုပ်ငန်းတော်တော်များများက သူတို့ ကုန်ပစ္စည်းကို ၁နှစ်အာမခံသည်လို့ ပြောနေချိန်မှာ ကိုယ်က ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို ၂ နှစ်အာမခံသည် လို့ သာသည်ဆိုယုံ ပြောတာနဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နည်းဗျူဟာမဖြစ်ဘူး။.
တစ်သက်တာ အာမခံသည် လို့ ဆိုမှ ဈေးကွက်ရနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်မယ်။
ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ချင်ရင် အစွန်းရောက်ဖို့ လိုတယ်။
မြို့ တစ်မြို့ ကနေ အခြားမြို့ တစ်မြို့ ကို ပါဆယ်ထုပ်ပို့ ဖို့ အတွက် ရက်သတ္တပတ်ကြာချိန်မှာ Fedex လုပ်ငန်းက “overnight Delivery” ဒီနေ့ ပို့ မနက်ဖြန်ရောက် ဆိုတဲ့ အာမခံချက်နဲ့ ဈေးကွက် ထိုးဖောက်ခဲ့တယ်။
( ၆ ရက်အတွင်းရောက်.. မဟုတ်ဘူး။)
ပီဇာရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ မှိုလိုပေါက်နေချိန်မှာ Domino ပီဇာလုပ်ငန်းက “30 min or free” ဖုန်းဆက်မှာရင် မိနစ်၃၀ အတွင်းအရောက်ပို့ တယ်၊ မရောက်ရင် ပိုက်ဆံမမေးပဲ အလကားစား ဆိုတဲ့ အာမခံချက် နဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခဲ့တယ်။
ဆရာဝန်ကို ၁၅ မိနစ်ထက်ပို စောင့်စရာမလို ဆိုတဲ့ အာမခံချက်နဲ့ ဆေးခန်း အချို့ က ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခဲ့တယ်။
ဘဏ်မှာငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ဖို့ ၅ မိနစ်ထက်ပို စောင့်စရာမလို၊ ၅ မိနစ်ကျော်သွားရင် အကောင့်ထဲကို ၅ ဒေါ်လာထည့်ပေးမယ်လို့အာမခံချက်ပေးမယ် လို့ ပြည်ပဘဏ်ကြီးတစ်ခုက ကြေငြာပြီးဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခဲ့တယ်။
နာမည်ကြီးရှေ့ နေတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် .. အမှုမနိုင်ရင် အခကြေးငွေပေးရန်မလို ဆိုတဲ့ အာမခံချက်နဲ့ ရှေ့ နေတစ်ယောက် ရှေ့ တန်းရောက်ပြီး ဈေးကွက်ပေါက်ခဲ့တယ်။
အာမခံချက်ဆိုတာ ..အစွန်းရောက်မယ်၊ စားသုံးသူစိုးရိမ်ရဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုပဲ ကောင်းကောင်းအာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင် …..
လုပ်ငန်းတွေအတွက် တော်တော်စွမ်းတဲ့ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နည်းဗျူဟာတစ်ခု ဖြစ်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဆင်တုတ်ကွေးပျောက်ကာစ လက်နာနာနှင့် ရေးသည်။